Diyaarso boorsadaada maalin dhan xeebta | Ragga Stylish
Cimilo wanaagsan, rabitaanku wuxuu yimaadaa inaad aado xeebta si aad u qubeysato oo aad ugu raaxeysatid bannaanka, laakiin ka hor intaadan u nuglaan, waa inaad hubisaa inaad si wanaagsan u diyaar garowday. Tani waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad maalin ku qaadato xeebta.
Ku bilow inaad hesho wax aad alaabtaada dhigato. Waa inuu lahaadaa awood ku filan ilaa toban shay, marka waa inuusan noqon mid aad u yar ama aad u weyn. Boorsada, boorsada ama boorsada duffel ... waxaad dooraneysaa qaabka adiga kugu habboon.
Haddii ay jiraan shay muhiim u ah inaad maalin ku qaadato xeebta oo ah shaashad qorraxeed, haddaba marka hore dhig si aadan u iloobin. Waxaad la tashan kartaa khabiir ku saabsan midka adiga kugu habboon, laakiin doorashada a SPF50 + laga bilaabo sumcad sumcad leh waligaa waad saxnaan doontaa Maaddaama ay jirto taxaddar yar marka ay timaaddo falaadhaha qorraxda, tixgeli inaad maal gashato aag xasaasi ah ku dheji sida kan Clinique.
Shukumaanka ugu fiican ee loogu jiifsanayo xeebta waa inuu lahaadaa mowduucyo faraxsan hadana qurux badan, sida moodooyinka soo socda. Sidoo kale, naqshadahan waligood kama baxayaan qaabka, gaar ahaan xargaha.
Haddii aadan rabin inaad maalinta ku dhammeysid khadadka muujinta intaad xoqdo wax badan, ha iloobin inaad xirxirto koofiyad iyo muraayadaha indhaha.
Ama sifiican u labbis iyaga oo meel u kaydso waxa soo socda oo baalal u siiya ruuxaaga xagaaga laga bilaabo marka aad ka baxdo albaabka.
Daboolka kuleylka ah ee cuntada, xoogaa flip-flops ah iyo dabbaal go'an oo loo qoondeeyey (oo aad sidoo kale xiran karto) ayaa dhameystiraya liiska waxyaabaha muhiimka ah ee maalin lagu qaato xeebta.
Oh, oo ha ilaawin inaad sidoo kale wax geliso wax kaa madadaalinaya inta udhaxeysa qubeyska (moobilka ma tirsado), oo si fiican u noqon kara kubad, ciyaar kaar ama majarafadaha xeebta sida kuwa aan halkan ku soo jeedineyno.
Adag & Karbaash
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad maalin ku qaadato xeebta
Waan jeclaaday maqaalka laakiin waxaan xirtaa koofiyada panama ee falya
Ku jawaab Naf
Ka samaysan koofiyad yar oo panama ah
Palette-ka meertada ah iyo daabacadaha garaafka ee cusub ee laga soo qaaday Webiga Island